Yell for the Blue Sky ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
Original Name – Aozora êru
ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလဲပေး … အချစ်လေးလဲ ရောထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော် … ဇာတ်ကားလေးရဲ့ နာမည်လေးက (Aozora êru – Yell for the blue sky) တဲ့ …
Kazune Kawahara ရဲ့ Manga ကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဘေ့စ်ဘောနောက်ခံ ကျောင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ် …
Orange နဲ့ My Brother Love Me Too Much ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသမီး Tsuchiya Tao လေး ပါဝင်ထားတာပါ …
အိုနို ဆိုတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ ဒအိစုခဲ ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့က Koishen ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင် တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ ရည်မှန်းထားသူလေးတွေပေါ့ …
အိုနို က ခရာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ဒအိစုခဲ ကတော့ ဘေစ့်ဘောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ် … နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ တူနေခဲ့ပါတယ် …
သူတို့နှစ်ယောက်က နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ ပြီးပြည့်စုံမယ့် အနေအထားမှာရှိပါတယ် … ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် ဘေစ့်ဘောကစားပွဲတွေကို ခရာအဖွဲ့က ဘေးကနေ တီးမှုတ်ရင်းအားပေးရပါတယ် … အဲ့တော့ ကောင်မလေးက ဘေးကနေ ခရာမှုတ် ကောင်လေးက ဘေစ့်ဘောကစား အဲ့လိုပေါ့ …
ဒီတာ့ ဇာတ်လမ်းလေးက … သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ အခက်အခဲလေးတွေ စိတ်ဓာတ်ကျစရာလေးတွေ ရှိခဲ့တယ် … အဲ့အခက်အခဲတွေကို ခွန်အားအဖြစ် အသုံးချပြီး ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ ဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ရှုစားလိုက်ကြပါနော် …
Rating အရ IMDb မှာ 6.1/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး တစ်ခုပါ …
Actors: Airi Matsui, Arata Horii, Fujiko Kojima, Mirai Shida, Ryoma Takeuchi, Shono Hayama, Tao Tsuchiya
Openload.co Myanmar 900 MB Download Soliddrive.co Myanmar 900 MB Download
2015 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Anthem of the Heart လို့ အမည်ရတဲ့ Anime လေးကို Live Action အဖြစ် ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … Anime တုန်းကလည်း အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Live Action မှာရော ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…
Our House ( 2018 )
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တီထွင်မှုတွေက အမြဲတမ်း အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နေတတ်ပါသလား ကိုယ်နေနေတဲ့အိမ်မှာရော ကိုယ်တွေအပြင် တစ်ခြားမမြင်ရတဲ့ ဝိဉာဉ်တွေပါ ရှိနေတတ်ပါသလား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပရောဂျက်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့ Ethan ဟာ မိသားစုကိုသိပ်ပြီး အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့သူပါ။ မိဘနှစ်ပါးဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်ညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့ကို စောင့်ရှောက်ရင်း သူ့ပရောဂျက်လေးကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးပဲ ဆက်ပြီး စမ်းသပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတီထွင်ထားတဲ့စက်က ရည်ရွယ်ထားသလိုမဖြစ်ပဲ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေကိုဖိတ်ခေါ်မိလျက်သားဖြစ်နေသောအခါ… IMDb rating 5.3 ရထားတဲ့ သရဲကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး…
MMATV Channel Pageမှတင်ဆက်လိုက်တဲ့ Horrorကားကြိုက်သူတွေအတွက် Qualityကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ 2008 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Ghost Stories လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်??? Story လေးတွေကတော့ တစ်ခုချင်းစီကသူ့ဇာတ်လမ်းနှင့်သူမို့ တစ်ကားပြီးတစ်ကားကြည့်ရတာ movie တစ်ကားချင်းဆီကြည့်ရသလိုဖြစ်မှာပါ ((သောကြာနေ့တိုင်း Friday Night Feverအနေနှင့် story တစ်ပုဒ်ချင်းဆီကိုတင်သွားပေးပါ့မယ်နော်??)) Nine- tailed Fox(Gumiho) ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့*********** လီမျိုးနွယ်အိမ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း…
Trailer: Yell for the Blue Sky ( 2016 )